Faallo: Taariikhda Iyo Dhibaatada Somaliweyn Ku Hayso Somalida Xorta… | ToggaHerer
← Wada-hadalka Somaliland iyo Soomaaliya qaybtii 10aad
S.N.M, intii ka soo hadhay- Maxay ku doorsadeen Somaliland-tii ay usoo halgameen. Caqliga ma gashaa inay wada carab beelaan mar qudha ! →
Sannadihii 1940s, waxaa Geeska Afrika ka soo shaac-baxday Aragtidii Somaliweyn. Aragtidaas xoogeedu waxay bilaamatay badhtamihii Dagaalkii Labaad ee Dunida (1939-1945). Halgamadii xornimadoonka ee dadyowgii Somalida ee ku noolaa Geeska Afrika oo ay kala hoggaaminayeen Ururkii SNL iyo SUP ee Somaliland, iyo Ururkii SYL ee Somalia waxay hilowga himaladoodu iyo riyaaqooda wadaninimo ku salaysnaa in la xoreeyo, mideeyo, hal calan iyo hal dawladna la hooskeeno 5tii Somaliyeed si loo helo dawladweyn oo Somaliyeed oo ka dhalata Geeska Afrika. Somaliland ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay ee Somaliyeed oo xorooba isla markaana hirgesha figradda Somaliweyn.
Markii Somaliland ka xorowday Boqortooyadii Ingiriiska Bishii June 26dii, 1960 waxay markiiba la midowday Somalia oo ka xorowday dawladdii Talyaaniga bishii July 1dii, 1960. Nasiib-darrose waxaa dhacday laba arrimood oo burburiyay himiladii Somaliweyn sidii Carabweyn ay u burburtay. Waa midda kowaade, Dalka Jabuuti ayaa markii uu xornimada qaatay 1977 diiday inuu ku soo biiro Somaliweyn isla markaana noqday dawlad madaxbanaan kadib markuu arkay in Somalia ka duudsiday Somaliland saamigii ay ku lahayd dawladdii midowga ahayd. Waa midda labaade, Somaliland oo ka noqotay midowgii ay la lahayd Somalia 1991 ka dib markii Somalia kula kacday Somaliland dulmi iyo tacadiyo ka baxsan Islaamnimada iyo Somalinimada mudadii uu jiray midowgu (1960-1990). Waxaa lagu maahmahaa, “Dambas aadan dabkiisa ku guban kama leexatid”. Somaliland waa ku gubatay midowgii waana ka noqotay. Somaliland iyo Somalia ma ahayn labadii dal ee midowgoodu burburo. Waxaa sidaas oo kale u burburay Midowgii Masar iyo Suuriya sannadkii 1961 kaas oo la sameeyay sannadkii 1958, Midowgii Yogoslafia oo kala tagtay 1995 kadib markii dagaallo fool xumi ka dhexdhaceen, Dalkii la odhanjiray Midowga Sofiyati waxaa lagu kala tegay oo uu burburay sannadkii 1989, midowgii la odhanjiray Senegambia ee ay sannadkii 1982 ku midoobeen Senegal iyo Gambia waxaa uu burburay sannadkii 1989 iwm.
Sidaas daraadeed, waa in la ogaadaa in 5ta Somaliyeed la kala leeyahay, dawladnimada midkastana aanay marnaba ka dhaxayn 5ta Somaliyeed isla markaana midkasta lagu galo sharci. Afrika oo dhan ayaa gumaysi kala qaybiyay oo dad isku jinsi ahku kala daray dhawr dal, Somaliduna waa la mid. Dalalka Asia, Koonfur Amerika iyo Afrika waxaa midkasta qaranimadiisu, dawladnimadiisu iyo aqoonsigiisu ku salaysanyahay xuduudii gumaysigu u qaday ama u jeexay. Sidaas ayaa dalalku ku kala badbaadeen oo midna aanu sheegankarin dhul iyo dad ka tirsan dalkale.